Imveliso yeBlogging: Uluhlu lokuKhangela lwePlagi yeWordPress
Iplagi yeWordPress: Uluhlu lokuHlola lweBlogging
NgoLwesibini, nge-21 kaDisemba ngo-2010 NgeCawa, nge-19 kaJanuwari 2014 URobby Slaughter
Emuva kwiBhlogIndiana 2010, senze ukumiliselwa okuthambileyo kwePlaginPress plugin ukunceda ukwandisa imveliso yabasebenzi. Ibizwa ngokuba luLuhlu lokuHlola lweBlogging, kwaye isekwe kumandla alula ngokungakholelekiyo kodwa omangalisayo woluhlu lokutshekisha.
Uluhlu lokuBhloga lokuKhangela yile nto ivakala ngathi: yenza inqwaba yeebhokisi zokukhangela oza kuzisebenzisa xa ubhala iposti yebhlog. Ngokuqinisekileyo, unokufezekisa into efanayo ngoxwebhu lweLizwi okanye ngeposi, kodwa ngokushumeka oku kwiPlagi yeWordPress kunokwenzeka ngakumbi ukuba ibekwe emgangathweni kwaye isetyenziswe ngokwenyani. Nantsi indlela ebonakala ngayo:
Yiyo leyo! Ngaphandle kokuba, ewe, unokwenza izinto ngokwezifiso ukuba ziqulathe nantoni na oyifunayo. Kwaye uluhlu lokutshekisha lubonakala kweyona ndawo iluncedo onokucinga ngayo, kwiphepha lokuHlela lePosti uqobo. Ke ngelixesha ukhona umbhalo iposti, ungazikhangela izinto ezikuluhlu.
Ukwenza ngokwezifiso uluhlu kulula kakhulu. Awunyanzelekanga ukuba wazi nayiphi na i-HTML. (Nangona ungayisebenzisa ukuba uyafuna.) Nali iphepha lolawulo:
Uyilo lweplagi ayenzelwanga ukuba ibe yiyo nayiphi na into ngaphandle kwephedi yokuqala. Akukho datha igciniweyo, kanye kanye oyifunayo. Emva kwayo yonke loo nto, kufuneka kwenziwe uvavanyo lokujonga ukuqinisekisa ukuba wenze konke okuluhlu Oku kunokubandakanya amanyathelo anje nge "run spellcheck" okanye "faka ifoto yesitokhwe" okanye "kuvavanye amakhonkco aphumayo." Zonke ezi zizinto ozaziyo kufanele yenza lonke ixesha ubhloga, kodwa ngale plugin unokukhunjuzwa ukuba uyenze zonke ixesha. Eyona nto ibaluleke kakhulu, bonke ababhali bakho baya kubona uluhlu olufanayo, olukhokelela kwizikhundla ezingqinelanayo, ezikumgangatho ophezulu.
Imahala kwaye iyinxalenye yendawo yokugcina esemthethweni yeWordPress. Khangela "uLuhlu lweBlogging Check" kufakelo lwakho lweWordPress, okanye undwendwele iphepha elisemthethweni.
Uluhlu lokutshekisha olonwabileyo!
tags: UhlalutyokumakishwaI-icon ye-facebookiMicrosoft Dynamics crmukuhanjiswaregex
Sizixabisa kuphela izixhobo esingazisebenzisa